Tuesday April 04, 2017 - 09:42:02 in Wararka by Wariye Tiriko
Sannadkasta Bisha Tobnaad 17keeda, waxa la xusaa oo loo asteeyey Maalinta Shuhadada SNM, Maalintaasoo ahayd Maalintii ay Mujaahidiin badan oo uu ka mid ahaa Halgamaagii weynaaMujaahid Maxamed Xaashi(lixle) ay ku le’deen Dagaal ba’an oo ka dhacay Burco-duurray.
Jawaabta Su’aashan oo aan raadin jiray ayaa waxaan helay Shalay Sabtidii oo a an si toosa ula kulmay Sarkaalkii Goobtaasi Nafwaaga kula Wareegay Hoggaam intii iyo Taliskii, ee uu ka dhiidhiyey inuu Calanku dhul u dhaco, WaaMujaahid Max amed Xaashi Cilmioo wakhtigan ku nool Hargeysa.
Mujaahid C/kariim Xaashi Cilmiwaxa uu ka mid ahaa Saddexdii Sarkaal ee kala ho ggaaminayey Guutadii uu Watay Lixle ee Saddexda Urur ka koobnayd ee gaashay Burco-duurray. Mar aan wax ka waydiiyey Arrintan waxa uu ii sheegay in Sadde xdaasi Urur ay kala hoggaaminayeen Issaga (C/kariim), Sarkaal kale oo Magaciisu la yidhaaC/razaaq Axmed Caliiyo Mujaahid Lixle oo dusha kasii wada xukumaay ey Guutada.
Intaasi waxa uu ii raaciyey inkastoo ay aakhirkii guulaysteen hadana Maalintaasi waxaa dhacay in Saddexda Urur midba dhankiisa loola lug iyo laanba beelay, Taasina ay keentay Mujaahidiin badan inay halkaasi ku naf waayaan. Waxaana isla markii uu dhaawacmay hoggaankii GuutadaMujaahid Lixle, Xilkii iyo Taliskii la wareegay Calankiina Dhul inuu u dhaco u diiday Mujaahid C/kariim Xaashi, oo halkaasi kasii waday Hoggaamintii iyo Dagaalgalintii Mujaahidiinta.
Mujaahid C/kariim Xaashiwaxa uu Maalintaasi dejiyey issagoo Hoggaankana u haya Hab ama Qaab iyo Qorshe Cusub oo aan horey loo arag oo lagaga guulays tay Cadawgii, Mujaahidku Maalintaasi muu fadhiisan ilaa Dhimasho iyo Dhaawac uu miduun ku soo helo Mujaahid Lixle, Waxaana issaga iyo Saraakiil kale aakhirkii ku soo guulaysteen Raad-cadii iyo halkii uu yaalay Issagoo Gacantiisa ku soo qaa dayMujaahid LixleIlaahay Naxariistii Janno haka waraabiyee.
Guusha uuMujaahid C/kariimkasoo hooyey Dagaaladaasi, ayaa isla maalmahaasi lagu abaal mariyeyLabo Billad Geesi. Waxaana halkaasi kasii socday Halgankii Xaq u dirirkaSNMoo dar dar cusub lasoo baxay, Kalsooni iyo dhiiranaan faro bandan na kasii qaaday DagaalkaasiBurco-duurraysida uu ii sheegayCabdikariim Xaashi Cilmi.
Gebogabadii Waxaan dhammaan ummadd Reer Somaliland usoo jeedinayaa inay Fiiro gaara u yeeshaanXiddigihii Dagaalka Wakhtiyadii Halganka,Waayo Ummad waliba waxay leeyihiin Xiddigo ay ku hirtaan, kuna faanaan.